Eo amin’ny toerana ambany indrindra
"Indro, lehibe Andriamanitra, kanefa tsy mba mamingavinga." Joba 36:5
"Izy no manangana ny malahelo ho afaka amin’ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin’ny zezika, mba hampiara-mitoetra azy eo amin’ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezam-boninahitra."" 1 Samoela 2:8
Mahafinaritra ankehitriny ny miresaka “fampiakarana ara-piarahamonina”, ilazana ireo fomba ahazoan’ny olona manatsara ny toerana misy azy ao. Te hanao mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra, ho an’ny tsirairay. Amin’ny lafiny ara-toe-panahy, dia mitovy avokoa isika rehetra, eo imasony: “Tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra” (Romana 3:22,23). Raha mijery ny tenantsika amin’ny maso tsy miangatra isika, dia tsy maintsy miaiky fa tena marina izany fahitan’Andriamanitra izany. Nefa raha manambara izany Andriamanitra, dia tsy mamela antsika amin’izao. Lazainy fa natao ho antsika ny fahasoavany sy ny famelan-keloka atolony, raha mino an’i Jesosy Kristy Zanany isika. Eny, samy efa nanota avokoa ny olona rehetra, kanefa kosa izay rehetra mino dia “hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany” (and 24). “Fa tsy misy fizahan-tavan’olona amin’Andriamanitra”, tsy misy fiangarana (Romana 2:11).
Ny Baiboly dia manome ohatra maro momba ireo olona lazaina hoe “eo amin’ny toerana ambany indrindra”, nefa “nampiakarina” satria nitoky tamin’Andriamanitra :
— Lazarosy, ao amin’ilay fanoharana nataon’i Jesosy, dia nahantra sy rakotra fery, ary ny alika no tonga nilelaka ny feriny; naniry izy hihinana izay latsaka avy tamin’ny latabatr’ilay mpanankarena (Lioka 16:19-31). Rehefa maty izy dia “nentin’ny anjely” ho any amin’ny fahasambarana any ankoatra.
— Ilay jiolahy niara-nohomboana tamin’i Jesosy dia niaiky ny helony ary nitodika tamin’ny Mpamonjy, ka nahazo ny valinteny hoe: “Anio no hihaonanao amiko any Paradisa” (Lioka 23:43).
Tsy misy toe-javatra mahakivy ka hoe tsy hahafahan’Andriamanitra hisarika antsika hanatona Azy.